Google Adigu Wax Badan ayuu Kaa Ogyahay, Adiguse Google Maxaad ka ogtahay? |
Google waxay iisu diyaarinayaa sanad guuradii 20-aad ee ka soo wareegtay xilligi la aasaasay. Haddaba inaga oo taa ka duuuleyna waxaan jeceleysannay inaan 10 qodob oo Google ku saabsan idinla wadaagno.
Bal waxaad dib u jeceleecdaa intaanu soo ifbixin Google ka hor sida ay noolashu ahayd? Ma xusuusataa haddii aad xog ama macluumaad aad si degdeg ah ugu baahato waxa aad sameyn jirtay iyo halka aad u doonan jirtay?
Haddase, wax kasta oo aad u baahato sida erey micnihii, cinwaan, goob, timaan ama wax kasta oo aad u baahato waxa ugu horreeya oo maskaxdaada ku soo dhacaya kuuguna dhow waa Google.
Shirkadda Google mahad ayey mudan tahay soo lama oran karo.
Wargeyska Forbis oo aan xogtan ka soo xigannay ayaa wuxuu sheegayaa halki ilbiriqsi iney 40,000 oo qof ay Google wax ka baaraan, maalintina 3.5 milyan oo qof.
Google hadda wax kasta ayuu noqon hayaa sida meel loo adeegsado xayaysiiska, qorshooyinka shaqada lagu soo bandhigo ama xogta shaqsiyaadkaba lagu keydiyo.
Haddaba dulucda qoraalkeenna aan u daadagnee waxaa xusid mudan in markasta oo aan xog u raadsanno Google uu isaguna qayb ka mid ah xogteenna aan siineyno.
“Waxaase isweydiin leh xog intee dhan ayuu naga qaadanayaa? waa hagaag su’aashaa iyo su’aala kalaba waxaad isku daydaa 10-ka qodob ee aan kuu faa’ideyneyno inaad ka fahanato”
Google micnihiisu waa maxay magacana siduu ku yimid?
Magaca Google inuu si khalad ah uu ku yimid haddii laguu sheego waa laga yaabaa inaad rumeysan weydo balse xaqiiqadu waa sidaa.
Magaca shirkadda marka la sameeynayay lala damacsanaa ayaa wuxuu ahaa ‘googol’ taasoo dhanka xisaabta marka laga eego loola jeeday 1 iyo boqol eber.
Haddaba, ardaygii allifay ee ugu horreeyey oo magaca qorayey ayaa wuxuu magacii ‘googol’ ahaa uu u qoray ‘Google’, khubaradii hal abuurka ku wehlisay ardaygana kama hor imanin magaca uu ardayga beddelay oo waa ay qaateen sidaa ayeyna shirkadda Google magacaa ku qaadatay.
Hal abuurayaasha Lari Page iyo Sergey Birin magaca ugu horreeyey ee ay la damacsanaayeen ayaa wuxuu ahaa eregyag Ingiriisiga ah ee ‘Backrub’.
Magacaasi oo lagu micneeyn karo wax kaa dambeyo ama xog aad meel kale ka heleysid taasoo loola jeeday xilligaasi maadaamaa uu Google keyd badan lahayn oo buu bogag kale xogta aad isaga ka raadiso uu kaa siin jiray.
Marki dambana wey ku qasbanaadeen iney magaci beddelaan.
3. Wax aan toosneyn oo uu qallooc uu ku jiro
Image captionsawir ‘askew’ uu qallooc ku jiro
Google ganacsiga iyo arrimaha kale oo keli ah lagama helo balse waxaa laga helaa ciyaaro (game) aad u badan.
Tusaale ahaan bal inta aad Google aaddo halka wax lagu raadiyo ku qor ereyga Ingiriisiga ah ee ‘askew’.
Natiijada kuu soo baxeyso ma fiirisay?
4. Ariga iyo Google
Shirkadda Google waxay inta badan sheegtaa iney ka shaqeyneyso isla-markaana ay taageereyso cimila noolasha ku habboon gaar ahaanna sidi loo heli lahaa duni cagaar ah oo wasakhda warshadaha ka madax bannaan.
Xaruunta dhexe ee shirkadda Google oo ku taallo gobolka Kaalifoorniya ee dalka Mareykanka waxaad ku arkeysaa ari gaaraya ilaa 200 boqol oo xafiiska dhex yaacaya.
Qofka marka ugu horreysay ay u tahay aragtida ariga faraha adan ee dhex yaacaya xafiiska Google wuxuuba isweydiinayaa qofkan xoola dhaqatada ee magaaladan ariga ku dhaqanaya muxuu yahay? Arigaasi xerada xaruunta Google daaqaya waxay shirkaddu ariga ku beddeshay mashiinnada cawska lagu jari jiray, ariguna waxaa iskala leh shirkadda Google.
5. Xawliga ay shirkaddu ku kobceyso
Image captionFacebook, Twitter, Telegram iwm ee aan isticmaalno maxad ka ogtahay cidda iskaleh?
Gmail, Google map, Google Drive, Google Chrome iyo waxyaaba la midka ah ee ay Google soo saarto waxaa u dheer laga billaabo 2010-kii waxay shirkaddu milkiday shirkada kale oo aad u badan.
Inaad taqaanno ama inaadan aqoonba wey dhici kartaa annaga ayaa diyaar kuula ah inaan kula wadaagno sida Android, Youtube iyo Adicine teknooloojiyadaha la yirahdo oo dhan waxaa iska leh Google. Ilaa iyo 70 shirkadood oo kala duwan ayay sida oo kale Google leedahay.
Image captionTartanka ardayda ee Google
Doodle waa barnaamij mareykanka ka shaqeeyo oo ay ardayda dugsiyada ku tartamaan si ay iyaguna ula yimaaddaan hal abuur la mid ah Google ama mid ka sii fiican oo dunida wax ku biiriya.
Laga billaabo marka tartankan la billaabay waxaan arkeynaa iney astaanta Google ay si isdaba joog ah iisu beddesho.
Sida oo kalana astaanta Google waxaa kale oo ay isbeddeshaa xilliyada ciidaha iyo dabbal dagyada caalamiga ah ay jiraan.
7. Fursad maal qabeennada soo dhaaftay
Sanadka marka uu ahaa 1999-kii labada arday ee la kala yidhahdo Lari iyo Sergey waxay in mudda ah maaal qabeennada ay ka baryayeen “iney shirkadda Google kaga iibsadaan 1 milyan oo doolar oo keli ah”
Iyaga oo weliba lacagta ay Google ku baayacayeen lahaa waan ka wada hadleynaa qiimaha aan sheegnay haddaad diyaar u tihiin inaad naga iibsato.
Hadda laakiin 20 sano kaddib shirkaddu waxay ku fadhido qiima ka badan 300 oo bilyan oo doolar.
8. Halku dhigyada shirkadda
Image captionAstaan xumaan iyo samaanba muujineysa
Halku dhigga ay shirkaddu isticmaasho ayaa wuxuu yahay ‘bakhiil’ ha noqonin, inkasta oo ay jiraan qaar badan oo leh maxaa ka galay shirkaddu fara dheeraa, shirkaddu tani iyo marki la aasaasay meysan beddelin halku dhiggeedaasi oo weli wey ku adkeysaneysaa.
9. Xaruunta Google oo aan laga waayin Cuntada
Image captionXaruunta dhexe ee Google waxaan marnaba laga waayin cunto
Mid ka mid ah mulkiilayaasha Google oo la dhaho Sergey Birin ayaa wuxuu amar uu ku bixiyey xafiiska guud ee xaruunta Google inaan marnaba cunto iyo astaanteedaba laga waayin.
Shaqaalaha shirkadda Google oo ka shaqeeyo xafiisyo aad loo qurxiyey markasta oo ay cunto u baahdaanna si ay goobta shaqada uga fogaanin waxay ka helayaan isla xafiiska dhexdiisa waxaana u diyaarisay shirkadda.
10. Saaxibka Google
Shaqaalaha shirkadda Google waxaa loo oggol yahay iney goobta shaqada ay u soo kaxeystaan eeyda ay iyagu leeyihiin. Eeyda ay shaqaalaha leeyihiin ee ay xafiiska la imanayaanna si ay jawiga xafiiska ula qabsadaan waxaa marka hore la siinayaa tababar eeyda u gaar ah, tababarka markay dhammeystaan ayaa xafiiska loo oggolaanayaa.